Sheekadii Xiisaha laheyd ee Libin Jaceyl Qeybtii 123aad -
Home Love Story Sheekadii Xiisaha laheyd ee Libin Jaceyl Qeybtii 123aad
Falis habeen habeenada kale kaga farxad badan ayay ku jirtay waxayna u aheyd habeen farxadeed oo ay ku riyaaqsaneyd nafteeda. Subax farxadeed ayaa u baryey lamaanihii xalay nolosha ku midoobay.
Falis oo saaka hurdada ku raagtay ayaa markii ay soo toostay markiiba u gudubtay musqusha markii ay soo meeratay ayay indhaheeda qabteen Mursal oo ku sugaya miiska cuntada oo ay ku tiri.
Macaane waxaan filayaa in an kaa soo raagay
Dhib malaha macaanto waxaa igu filan qalbigaaga oo negi ii ah
Waxaan filaa quraacda waa diyaar ah aaway uma jeedee Aamow miyey baxday
Macaanto ma anigaa ogol in ay cidi na soo kala dhex gasho Aamow xalay Ayaan fasaxay
Micnaha saaka ma aysan imaan miyaa
Oo hadda quraacda yaa diyaariyey
Yaa kale hee macaankaaga waliba quraac noocii aad jecleyd ayaa diyaar ah soo dhawoow
Mursalow waad igu ciyaareysaa oo hadda ma waxaad I leedahay wax walba aniga ayaa qabtay oo caawimaadna uma baahan
Haddii aan isku kalsooneen ma anaa Aamow fasaxi lahaa nolosha si wanaagsan Ayaan u aqaan mana rabo in maalmaheena macaan uu cid kale nagu dhex jirto
Wallaahi waan ka helay fikirkaaga ii sheeg aniga hadda maxaan kugu saacidaa
Maya maya ma taqaanaa ninka xaaskiisa tahay waa nin ku sifoobay xushmeynta Jaceylka dhibna kulama rabo Macaanto
Maasha allah macaane waan ogaa in dumarka oo dhan in aan ugu nasiib badan nahay mar hadaan nin I jecel aniga aan jeclaha aan nolosha kula midoobay.
Falis maalmihii wacnaa ee nolosheeada ayay ku jirtay waxayna aaminsaneyn in noloshii wanaagsaneyd ee abidkeed ay rajeyn jirtay in ay maanta heyso wax walbana waxa ay u ahaayeen farxad Mursal oo ahaa shaqsi darajada iyo xushmada ku wanaagsan ayaa Falis dareen siiyey in uu si xad dhaaf ah u jecel yahay noloshiisan ay iyada tahay.
Todobaadkii arooska ayaa sidaa ku soo gabagaboobay Falis reerkeeda oo ay hoyadeed hogaamineysaa ayaa maalintaa shaashka saaray iyada oo waliba aad ugu faraxsaneyd nolosha la kuntay ee ay dib u heshay.
Farxada Falis qof kasta oo reer Warsame Cali ayay la weyneyd Samiira haba ugu horeysee waxayna Falis iyo Xaajigeeda ku cusuuntay guriga reer Warsame Cali oo maalin qado loogu sameeyey Samiira fikirkeeda reerka oo dhan waxa ay ku wada faraxsanaayeen waxaana lagu balamay in maalintaa qado famil la wada qaado cid kastana waxaa loo sheegay in aysan qadada ka maqnaan Samiira waxa ay si xoogan ugu dardarsiisay Qadar inuusan maqnaan waana uu ka aqbalay.
Samiira ujeed kale oo iyada u gaar ah ayaa jirtay oo ay ku dooneysay in ugu dambeyn ee soo afjarto khilaafka Qadar iyo Falis ee aadka u dheeraaday.
Falis iyo xaajigeeda Mursal si wanaagsan ayaa loogu soo dhaweeyey gurigii reer Warsame Cali kabaweyne oo xuishmad gaar ah looga haayey maalintaa si wadajir ayaa reerka oo dhan miis qura ugu wada qadeeyeen intii lagu guda jiray qadadii ayay Falis inta ay soo istaagtay ayay Qadar kor timid oo madaxa ka dhunkaday Qadar ayaa markiiba inta uu soo istaagay isku dhuubay Falis ayaa mar kaliya la soo booday.
Maxaad ilaa hadda aan u qiran la’dahay in aad iga qaldaneyd aad ku diidan tahay in aad I raali geliso maxaase dad kale igu soo maree sow ma ogid in aad reerkaan oo dhan aad iga dhowdahay.
Qadar inta uu madaxa ka dhunkaday ayaa uu yiri
Cabsi uun Ayaan kaa qabay mooyee mar hore Ayaan ku hor imaan lahaa adadeyg ayaan kugu ogaa Falisey Waa ku baryaa I cafi waan ogahay in aan ku fogeeyey.
Mar Hore Ayaan raali kaa noqday sidoo kale adigana I cafi
Halkii ayaya walaalihii sannado colaada ku kala maqnaa ku heshiiyeen aad ayaana loogu wada farxay waalid iyo Walaal Mursal oo si gaar ah dareenkiisa arrintaan u gedisay ayaa xaaskiisa ku yiri.
Waan ogaa In aad qof qalbi nadiif ah aad tahay waana sababta aan arrintaan kugu adkeyn waayey waana hubay in aad maalin khilaafkaan aad soo afjari doontid.
Si waajir aha ayaa loogu wada hamblayey waxaana hadalkii ku soo laabtay Mursal oo yiri
Aniga munaasabadaan waxaan kaga faa’ideysanyaa arrin kale oo aniga iyo Xaaskayga aan isku fahamnay waxaana go’aan ku gaartay in aan u guurno oo uu deegaankeena noqdo Dubay.
Mar kaliya ayay qof waliba aamusnaan gashay waxaana soo booday Samiira oo tiri
Mursalow ma Falis oo hadda reerka la midowday Ayaan naga fogeyneysaa
Dumaashi sidaas maaha shaqdeyda ayaa halkaas ah mana doonayo in aan nolosheyda aan ka fogaado ileyn Falis waa aniga nolosheyda.
Faraxdiina ayaa nala weyn go’aankiina waan soo dhaweneynaa wallow Falis xiiso badan gurigaan looga qabo.
Samiira Abaayo maanta dunida iyada ayaaba Tuulo ah oo aan sina loo kala fogeyn maalin kasta muuqaal Ayaan wadaagi karnaa
Haye Hooyo iyo Aabe hadalkiina Ayaan sugeynaa
Goormaad baxeysaan Aabe
Usbuuca dambe Ayaan rajeynayaa dabcan Viisaha waa u soo baxay Falis
Si kasta ilmaheyga waan idiin duceyneynaa illaahay farxada ha idiinku ilaaliyo haye Xaajiya
Waa sidaas aaminta ducada ayaan idiin hayaa ilmaheyga waana idinku faraxsan nahay
Si wadajir ayaa loogu wada duceyey Falis iyo Mursal sidoo kale ayaa Qadar Casho ku casuumay ka hor inta aysan dhoofin si sawiro xasuus ah u galaan waxaana la isku afgartay goobta cashada loo tagayo iyo xilliga.
Mursal iyo Falis ugu dambeyn waxaa soo guda galay safarkooda waxa ayna ku jireen alaab gurashadooda waxa kaliya ee Falis sida xoogan ugu murgeysay ayaa aheyd Aamow oo ah gabadhii guriga la joogtay oo aan reer ku laheyn magaalada oo markii horeba u soo shaqo doonatay waxaase ugu dambeyn culeyskaas ka dejisay dumaashideed Samiira oo u sheegtay in ay iyaga la joogeyso waana la isku waafaqay.
Ugu dambeyn waxaa soo guda galay safarkii Falis iyo Mursal sidii lagu balamay cashadii sagootinka ayaa la wada fadhiyey.
Waa mid ka mid ah hoteeelada ugu fadhiga qurxoon ee Muqdishu waxaana caawa casho sagootin ah loogu qabanayaa lamaanihii dhawaan nolosha ku midoobay Falis iyo Mursal si wadajir Ayaan loogu wada faraxsanaa Qadar iyo Xaaskiisa Samiira ayaana howl wadeen ka ahaa is marxabeyn badan ayaa Meesha ka jirtay waana lagu wada qanacsanaa.
Falis oo aad ugu faraxsaneyd habeenkaa casho ee uu u sameeyey walaalkeed Qadar ayaa Mursal oo garabkeeda fadhiyey ku tiri Musqul Ayaan tagayaa in ay isku filan tahay waa u sheegtay sidii ayay Falis ku soo dhaqaaqday oo xaggii musqusha loogu tilmaamay ku soo aaday waxaase mar kaliya dhagaheeda soo gaareen cod ay si fiican u taqaanay oo dhinaca musqusha ka imaanayey waa ay u soo dhawaaday misana waa Yaasiin oo xeran dharka wiilasha geegeeyaasha hotelka ay xeran yihiin waxa uuna la hadlaayaa wiil kale oo ay Falis u fahamtay inuu yahay madaxa Meesha waxaana sheekada dhexmareysay oo ay Falis dhegta u taageysay ahayd sida tan.
Saaxiibkaygoo I maqal waa codsi arrintaan ee iga aqbal
Fasaxaaga waa uu igu batay mana yeeli karo
Saxiiboow aniga fasax I sii kuma dhihin ee hoolka aan ku qorana nahay iga badal oo kaliya Ayaan ku dhahayaa maxaa yeelay hoolkaas dad aan rabin in ay sidaan igu arkaan ayaa fadhiya xataa hoolka kale ee Arooska ka socda ii wareeji walaahi ilaa caawa saq dhexe waan kuu shaqeynayaa .
Maxay tahay sababta aad u shareysaneyso holkaan dad caadi ah ayaa casho ku cunayaa maxaa ka jira bal wax I fahamsii waan ku fahmi la ahay.
Walaaloow gabadha cashada loo sameynayaa waa gabar aan hore u furay waliba reerkeeda waa ay la socdaan marka ma rabo in duruuftaan igu aragto waa ku baryaa nin rag oo cidloon Ayaan ahay ee caawa oo kaliya karaamadeyda dhowr.
Markii uu halkaas marayo ayay falis hadalkii soo dhexgashay oo ay ku tiri
Yaasiinow xataa waagaan wada joogtay haddii aad shaqadaan qaban laheyd waan ku farxi lahaa ileyn shaqo waa shaqo sideedana ceeb ma keento waxaanse is weydiinayaa ilaa intee ayaad runta ka carari kartaa adiga iyo aniga nolosheena xilli hore ayay soo idlaatay balse Qadarka aad ka carareyso adiga ayuuba uu walaashaa qabaa ee ilaa intee ka carari kartaa ii sheeg.
Haddiina cida aad ka carareyso uu Qadar yahay orodkaaga orod ku dar ileyn Qadar saami ayaa uu ku leeyahay Hotelkaan maalin uun waa uu kaa soo horbixi doonaa.
Yaasiin in ay Falis halkaan iyo marxadaaan ku aragto ayaaba ayaandaro u ahaydee markii ay dhagahiisa maqleen in Hotelka Uu Saami ku leeyahay Qadar markiiba meeshii ayaa uu ka cararay.
Falis sidii ayaya musqushii ay u baxday ku abaartay markii ay fadhiga ku noqotayna cidna lama wadaagin wixii ay halkaas ku soo aragtay sidii Ayaan habeenkaas casho farxadeed iyo sagootin lagu qaatay laguna balamay in si wadajir Garoonka loo geyn doono maalinta xigta.
Waa subixii ay dalka ka dhoofayeen Falis iyo Mursal waxaana wax ka soo sagootinaayey reerkeeda waxaana ooyin lagu celin kari la’aa Aamow oo aad isu xumeysay in Falis ay ka tageyso qof kasta ayaana samirsiineysay Falisna waxa ay u balanqaaday in sanad kadib ay Viso u xareyn doonto haddana taa kuma qanceynin waxayse mar kaliya la soo booday.
Falisey ma fileynin in aad banaan igaga tageyso
Sidaasoo dhan Aamoowey ha ii calool gedinin waad ogtahay in aan gurigaan ku soo barbaaray aan kugu salimay caloosha celi aniga ha iga ooysiinin.
Gurigaas kii aad ka soo carartay sow maaha oo aad Qadar ka joogi weyday
Mar kaliya ayaa la wada qoslay oo Qadar la wada fiiriyey Qadar oo aan Meesha ka fogeyn ayaa yiri
Sidaas oo dhan ha ii xumeynin Aamina walaahi waan is badalay qoftaas garabkaaga taagan jaceylkeeda ayaa nolosheyda badashay xataa wareyso Farxiya waa taas.
Ogow Aamina gurigeena marti kuma ahaaneyso waxaana tahay gabar reerka ka tirsan waxba ha is ciil gaanbinin Falisna caloosha u fur.
Sidii ayaa la isku macasalaameyey Falis si maxabo ku jirtana loo sagootiyey Falis iyo wiilkii ay korsatay ee walaasheed dhashay waxa ay nolol farxad ku jirta kaga bilaabatay magaalada Dubay ee dalka Isutaga Imaaradaha Midoobay Falis waxa ay heshay soo dhaweyn balaaran oo ay ka heshay Reerka ay u dhaxday iyada si weyn ay u weyneeyeen hablaha la dhashay Mursal oo farxad u aheyd in walaalkood uu nolosha la wadaago gababadhii uu mudo jaceylkeeda la dhibtoonayey.
Falis haddii ay farxada la joogtay noloshana ku heysatay qof farxada ku ilaaliya iyo qoys ay boqorad u aheyd waxaad mooday in noloshii hore ee xumeysay ay ilaawday, Waxaase dhinaca kale nolosha la dhibtoonayey Yaasiin oo xaaskiisa cusub looga dhigay qof kulul oo aan sina ugu ogolaaneynin inuu wax la’aan habeenkii xaafada ku soo laabto waana sababta uu nolosha ugu samro shaqo kasta u qabto mararka qaarna asxaabtiisa u dhexgalo oo uu xoogaaga uu ka soo helo ku soo guryo noqdo. Yaasiin reerkiisa xilli hore ayay is deeyeen meelna iskuma sheegaan.
Adduunyo ayaa sidaas ah maaliba meel ayay ku soo hergashaa Falis waxa ay heysatay noloshii ay weligeed ku riyoon jirtay sidoo kale Qadar culeyskii ugu weynaa ee noloshiisa ayaa ka degay mar haddii ay saamaxday walaashiis Falis oo in muda isku tirinaayey inuu ahaa qofkii nolosheeda xumeeyey manta waa uu ku riyaaqsanaa in ay noloshii ay qalantay ay heysatay. Samiira ayaa iyadana ka mid kuwa nolosha ay siisay farxada waxa ayna aamisaneyd in heshay Libintii Jaceylkeeda.
Dhamaadka sheekada Ayaan ku soo gunaanadayaa heestii XURMEYNTA JACEYLKA iyo fanaanad igu qaali ah KHADRA CABDI SLIMO Erayadii Abwaan Cabdishukur Allayahdik.
JACEYLKA DHABTAA XURMEYNTA
RUNTII KU XASILA MUDNAANTA
MARKAY XAG KASTABA TURXAANTA
KA DHOWRAAN LABO XUMAANTA
GAYAAN IS XUSHA WACNAANTA
XUBIGA KU HANTA LADNAANTA
SI XORA UGU HELA AMAANTA
XISKAYGA MARKUU TILMAAMTA
XAGAAGA HOLADAY DANEYNTA
ADAA ULA XUSHAY DAWEYNTA
XUBNAHA KUU NUGUL XUSHMEYNTA
XIISAHA MAANKIYO QULUUBTA
WEERAHA KAGA TAGAY XUSUUSTA
ADAA XOOJIYEY LAABTA
NAFTANA UGA BA’ A XAJIINTA
XAQIIQ ADIGUU ASLUUBTA QALBIGA
KUGU XUSHAY AQOONTA
XAQDHOWRKA LAGU LADAY ADAABTA
PENNED BY XAALI XASSAN XAALKOOS
Waa Dhamaadkii Sheekadii : Libin Jaceyl kala socoteen Jimco walba Jowhar.com una gaar ah jowhar.com waxaana ku soo fara yareeystay qoraga reer jowhar Haalkoos xaalkoos@hotmail.com